Hojiin gaariin yookaan Ibaadaan ikhlaasa hin qabne kasaaraadha! - NuuralHudaa
Hojiin gaariin yookaan Ibaadaan ikhlaasa hin qabne kasaaraadha!
Abu Hureeyran(RA) akkana jechuun gabaasan:
Ergamaan Rabbii(ﷺ) akkana jedhan:
(Namni lammafaan immoo) nama beekumsa(ilmi) baratee barsiise fi Qur’aana qara’edha. Funduree Rabbitti ni fidama. Ni’ima(qananii) itti oole Rabbiin ni beeksisa. Namtichis ni beeka. Rabbiin “Qananii tanaan maal hojjatte?” jedhaan.” Siif jedhe beekumsa (amantii ) baradhe barsiise, Qur’aanas qara’ee. “ jedha namtichi. Rabbiin ni jedhaan,” Sobdee jirta. Inni Aalima(beekaa) akka jedhamtuuf beekumsa (amantii) baratte;inni qaaridha(nama Qur’aana qara’u) akka jedhamtuuf Qur’aana qaraate. Jedhamtees jirta. Ergasii fuula isaatin lafarra harkifamee ibidatti akka darbamuu ajajama.
Namtichi biraa immoo nama Rabbiin dureessa godhee fi qabeenya gosa hundaa kenneefi. Funduree Rabbitti ni fidama. Ni’ima(qananii) itti oole Rabbiin ni beeksisa. Namtichis ni beeka. Rabbiin,”qananii tanaan maal hojjatte?” jedhe gaafata. Karaa qabeenyi irratti akka bahu Ati jaallatu wayitu hin dhiisne Siif jedhe qabeenya koo baasu malee. “ jedha namtichi. Rabbiin ni jedha,”Sobdee jirta. Garuu ati arjaadha akka jedhamtuuf kana dalagde. Jedhamtees jirta.” Ergasii fuula isaatin lafarra harkifamee ibidatti akka darbamuu ajajama.” (Hadiisa Qudsi- Musliimin Gabaafame)
“Ergamaan Rabbii(ﷺ) akkana jedhan,”Namni faaruu namoota argachuuf hojii gaarii isaa isaan dhageessise, Rabbiin niyyaa dhugaa isaa (Guyyaa Qiyaama) namoonni akka beekan godha. Namni hojii gaarii agarsiisu fi faaruu isaani argachuuf ummata keessatti hojjatu, Rabbiin niyyaa dhugaa isaa ifa baasa(ni salphisaas.)” Sahih Al-Bukhaari
Hojii tokko hojjatuun dura maaliif hojjadha, jaalala Rabbii moo jaalala namootaa argachuuf jenne of gaafachu qabna. Hojiin keenya fudhatama kan argatu ikhlaasa yoo qabaate qofa waan taheef. Ikhlaasa horachuuf ammoo carraaqqi guddaa barbaachisa. Beekumsa, du’aayi fi obsa barbaachisa.
Wanti irraanfatamu hin qabne tokko “hojiin koo ikhlaasa hin qabu” jennee dhiisu hin qabnu. Akkana yoo goone kaayyoo sheyxaanaa bakkaan geenye jechuudha. Wanti sheyxaanni barbaadu ilma namaa hojii gaarii irraa abdii kutachiisuun, hojii badaatti garagalchuudha. İkhlaasa argachuuf dalagaa gaarii keenna hojjatuu itti fufaa, Rabbiin ammoo ikhlaasa akka nuu kennu kadhachuudha. “Yaa Rabbii ikhlaasa na kenni” jechuudha!
August 4, 2021 sa;aa 11:44 am Update tahe